Nudgify: Ampitomboy ny fivadihan'ny fivarotanao miaraka amin'ity sehatra porofo ara-tsosialy miharo | Martech Zone
Alahady, Aogositra 29, 2021 Alahady, Aogositra 29, 2021 Douglas Karr
Ny orinasako, Highbridge, dia manampy ny orinasa lamaody handefa ny mitarika-to-mpanjifa paikady anatiny. Satria orinasa nentin-drazana izy ireo izay tsy namatsy mpivarotra afa-tsy izy ireo dia mila mpiara-miasa aminy izay hanampy azy ireo amin'ny lafiny teknolojia ary hanampy azy ireo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fivoaran'ny marika, ecommerce, fanodinam-bola, marketing, fiovam-po ary ny fanatanterahana.
Satria voafetra ny SKU misy azy ireo ary tsy manana marika ekena izy ireo, dia natosika handefa amin'ny sehatra vonona, azo ovaina ary mitaky famatsiam-bola kely noho ny stack namboarina tanteraka… nisafidy izahay Shopify.
Satria izy ireo dia manomboka ity orinasa ity hatrany am-boalohany, ny fahatokisana ireo mpitsidika anay dia ho be fanakianana. Miaraka amin'ny paikadim-pifandraisana amin'ny daholobe, automatisation marketing (via Klaviyo), serivisy ho an'ny mpanjifa matanjaka, ary fandefasana maimaim-poana… mila famantarana amin'ny tranokala ecommerce izahay izay ahafahan'ny mpitsidika mahafantatra fa malaza ity tranonkala ity ary ampiasain'ny mpitsidika azy. Nila a porofo ara-tsosialy vahaolana izay mitambatra amin'ny Shopify.
Inona no porofo ara-tsosialy?
Porofo ara-tsosialy dia tranga sosialy iray izay andian'ny olona maka tahaka ny fihetsiky ny hafa amin'ny fikasana hanao fitondran-tena amin'ny toe-javatra iray. Raha fintinina, ny olona dia manao izay hitany fa ataon'ny olon-kafa. Fiarovana isa izany.
Robert Cialdini, Fananarana, ny psikolojia fandresen-dahatra
Miaraka amin'ireo tranonkala ecommerce dia nandinika ny asa porofo ara-tsosialy mihoatra ny mpitsidika fotsiny aho. Manome fomba hafa handefasana fiovam-po ny porofo ara-tsosialy:
Trust - Ny fahitana fa mitsidika sy mividy ny mpitsidika hafa dia famantarana matanjaka azo itokisana ny marika, vokatra na tranokala.
maika - Amin'ny tranokala misy lisitra voafetra dia voatosika ny mpitsidika hiova fo avy hatrany fa tsy hiandry. Tahotra sao ho very (FOMO) dia teknika fiovam-po mahery vaika.
Popularity - Amin'ny fampiroboroboana ireo vokatra mivarotra indrindra, ny mpitsidika tsy mahalala fomba dia hirona kokoa hividy raha mahita fa ny hafa no nanao azy.
Offers - Manana varotra na fihenam-bidy ve ianao? Ny famoronana ireo Nudges ireo dia afaka mitondra ny tahan'ny fiovam-po amin'ny tolotra malaza anananao.
fahazoana - Na dia tsy vonona hividy aza ny mpitsidika anao dia azonao atao ihany koa ny manosika ireo mpitsidika hisafidy ny tolotra, taratasim-baovao na hafatra an-tsoratra mihitsy aza.
Nudgify dia efa nanampy tranokala maherin'ny 1,800 tany amin'ny firenena 83 hampitombo ny taham-panakalozany - tsy misy afa-tsy angona data. Ny endri-javatra amin'ny sehatr'izy ireo dia ahitana:
Recent Activity - manao ahoana ny fiovam-po tato ho ato na ny fisoratana anarana tato ho ato ary mampitombo ny fitokisana
Fahanana angona tahiry - Asehoy ny angona tahiry amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny feed automatique
Form Autocapture - Mampiseho fisoratana anarana vaovao ho azy
Nudge Templates - Nudges efa namboarina ho an'ny e-Varotra, Travel, SaaS sy maro hafa
Nudge Builder - Manaova Nudges vaovao amin'ny teninao sy ny sarinao manokana
Fitsipika fampisehoana - Manapaha hevitra momba ny pejy sy ny fitaovana tokony hisehoan'ny Nudges anao
Fomba fiasa - Mametraha trigger, tara ary faharetan'ny Nudges anao amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo slider.
Mamorona tanjona - Ataovy tanjona ny hanamarina ny fanovana fanampiana. Mampiasà statistika natsangana hanatsarana sy hahazoana varotra bebe kokoa.
Fomba amam-panao - Amboary ny lohahevitrao mba hametrahana ny feo mety
Tenim-pirenena 29 - Manohana tanteraka ny fiteny 29 samihafa i Nudgify
Drag & Drop Streams - Mamorona riandrano ary asehoy ny Nudges milamina
Nudge Analytics - Alao ny fitsidihana, fifanakalozana, ary ny fiovam-po ampiana handrefesana ny fiverenan'ny fampiasam-bolanao porofo ara-tsosialy.
Ny algorithman'i Nudgify dia mianatra tsy tapaka izay i Nudge no mamadika tsara indrindra amin'ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpanjifa. Arakaraky ny fampiasanao ny Nudgify no ahazoana azy bebe kokoa.
Atombohy ny fitsapana ny Nudgify maimaim-poana
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Nudgify, Klaviyo, Shopify, ary Amazon ary mampiasa ireo rohy ireo amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity.
Tags: tahotra ny tsy hitafomomampitombo ny tahan'ny fiovam-pomitombo ny fiovam-pomampiakatra ny tahan'ny fiovam-po ecommercehampitombo ny fiovam-po ShopifyManitsy moramoranudgifyPsychologyvarotra popporofo ara-tsosialyinona no porofo ara-tsosialy
Ahoana ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fikarohana Organika (SEO) anao